क्रिकेट संघका पूर्वसचिव प्याकुर्‍यालको सदस्यता खारेज, सिरहाको निर्वाचन रोक्न राखेपको निर्देशन :: सीताराम कोइराला :: Setopati
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अन्तर्गत चार वर्षे कार्यकाल सकिएका २० वटा जिल्ला क्रिकेट संघको चुनावी अधिवेसनले अहिले क्रिकेटको माहोल तातेको छ। बाँके जिल्ला क्रिकेट संघको अधिवेसन सकिँदा यो साता अधिकांस जिल्लामा अधिवेसन हुँदैछन्।
केही जिल्लामा भने सदस्यतामा विवाद देखिएको छ। जिल्ला क्रिकेट संघ बर्दियाले क्यानका पूर्वसचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालको सदस्यता ‍खारेज गरिदिएको छ भने सिरहामा मनलाग्दी सदस्यता वितरण गरेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌ (राखेप) मा उजुरी परेको छ।
बर्दिया जिल्ला क्रिकेट संघको अधिवेसन माघ ५ गते हुँदैछ। जिल्लाबाट सदस्यता नवीकरण हुन नसकेपछि प्याकुर्‍यालले जिल्ला क्रिकेट संघ बर्दियाका अध्यक्ष विनय राज भण्डारीलाई इमेल लेखेका छन् भने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र जनरल म्यानेजर रौनकविक्रम मल्ललाई सिसी (बोधार्थ) पठाएका छन्।
चार दिनअघि प्याकुर्‍यालले लेखेको इमेलमा जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचनअघि आफूले सदस्यता नवीकरण गर्न जिल्ला पुग्न नसकेपछि फोनमार्फत आग्रह गरेको उल्लेख गरेका छन्।
प्याकुर्‍यालले गत असोज १३ मा दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी हुँदै क्यानको सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीसँगै उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका थिए।
आफ्नो सदस्यता नवीकरण नभएपछि पूर्वसचिव प्याकुर्‍यालले दु:ख व्यक्त गरे।
‘नवीकरण कसैको निगाहले हुने कुरा होइन। मन लाग्दा दिने र मन नलाग्दा नदिने भन्ने हुँदैन। तपाइँ योग्य हुनुहुन्छ भने कसैले निगाह गर्नु पर्ने होइन,’ उनले भने।
प्याकुर्‍यालले आफ्नो सदस्यता नवीकरण नहुनुलाई क्यानमा अझै पनि व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भएको आरोप लगाए।
‘जिल्लामा सदस्यता नवीकरण गरे फेरि माथि पुग्छु। नेतृत्वलाई चुनौती दिन्छु भन्ने कसैलाई लागेको हुनु पर्छ,’ उनले भने।
यता बर्दिया जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष विनय राज भण्डारीले पूर्वसचिव प्याकुर्‍यालले समयमै निवेदन नदिएकाले सदस्यता नवीकरण नगरिएको बताए।
‘उहाँले फोन गरेर नवीकरण गरिदिन र पैसा पठाउँदैछु भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसरी फोनमा भनेर हुँदैन। सम्बन्धित मान्छे आउनुपर्‍यो वा कसैलाई अख्तियारी दिनुपर्‍यो।’
प्याकुरेलले नवीकरणका लागि जम्मा गरेको भौचर तोकिएको मितिभन्दा पछिको भएको पनि जिल्ला अध्यक्षको दाबी छ।
‘हामीले पुस २७ सम्म नवीकरण गर्नका लागि पत्रिकामा सूचना निकालेका थियौं। तर उहाँले जम्मा गर्नुभएको भौचरमा २९ गतेको मिति छ। अनि कसरी नवीकरण हुन्छ त !,’ उनले भने।
प्याकुर्‍यालले फोनमार्फत नवीकरण गर्न अनुरोध गरेको कुरा सत्य भएको बताए। तर सदस्यता नवीकरण गर्ने वा नगर्ने विषय नियतको भएको उनको भनाइ छ।
‘यहाँ सदस्यता नवीकरण नगर्ने बहानाहरू जिल्लाले खोजिरहेको छ। जिल्लामा न अफिस छ, न मान्छे फेला पर्छन्, न नवीकरण गर्ने ठाँउ छ। केन्द्रले कार्यालय संचालनका लागि लाखौं रूपैयाँ दिइरहेको छ। तर जिल्लामा न कुनै जवाफदेही मान्छे छ, नवीकरणका लागि मान्छे-मान्छेको ढोका चाहार्दै हिड्नु पर्ने हो र! त्यसैले पूरै प्रणाली करप्ट हुन लागेको हो कि भन्ने भान भएको छ,’ प्याकुर्‍यालले आक्रोश व्यक्त गरे।
सिरहाको निर्वाचन रोक्न निर्देशन
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले सिरहा जिल्ला क्रिकेट संघको सदस्यता वितरणमा विवाद देखिएपछि निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ।
सिरहाका कैलाश चौधरी, प्रवेश केसीसहित १२ जनाले राखेपमा उजुरी दिएपछि राखेपको संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलले क्यानलाई पत्र पठाएका छन्।
योग्यता पुगेका व्यक्ति र क्लबलाई तोकिएको रकम लिइ सदस्यता वितरण गरी सिरहा जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जिल्ला अध्यक्ष सुनिल कुमार महासेठले आफूखुसी योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुलाई २०७४ सालमा सदस्यता वितरण गरी मनोमानी ढंगले निर्वाचन गराएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएको राखेपमा दर्ता गरिएको निवेदनमा आरोप लगाइएको छ।
क्रिकेट खेलाडी प्रवेश केसीले महासेठले क्यानको सदस्यता सिराहा बजारमा मात्र सीमित गरेको आरोप लगाए। उनले लाहनका योग्यता पुगेका व्यक्ति र क्रिकेट खेलाडीहरुलाई सदस्यता वितरण नगरेको बताए।
राखेपमा उजुरी परेपछिम माघ ७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन रोकेर छानविन गर्ने क्यानलाई निर्देशन दिइएको छ।
‘निर्वाचन रोक्का गरी निश्पक्ष तवरले सदस्यता वितरण गर्न लगाई मिति २०७४ सालमा वितरण गरेको सदस्यता र हाल वितरण गरेको सदस्यताको न्यायचित छानविन हुन परिषद समक्ष सो निवेदन पेश हुन आएकोले सो विषयको सन्दर्भमा नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ (तेश्रो संशोधन) २०७४ को परिच्छेद ९ को धारा २३ र २४ बमोजिम सदस्यता वितरण गरिएको हो, होईन ? कति जनालाई सदस्यता वितरण गरिएको हो? संख्या सहितको विवरण उपलब्ध गराउनु हुन तथा निश्पक्ष ढंगले छानविन गरी सो को सत्य तथ्यतिर विवरण परिषदमा यथासिघ्र पेश गर्नुका साथै उक्त निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित गराउन सिरहा जिल्ला क्रिकेट संघलाई आवश्यक पत्राचारका लागि परिषदको मिति २०७८।९।३० को विभागीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ राखेपको पत्रमा उल्लेख छ।
चार वर्ष कार्यकाल सकिएका २० जिल्ला क्रिकेट संघ
बाँके (सकिएको), सिरहा (राखेपद्वारा तत्काल रोक्न निर्देशन), सुनसरी (माघ ३), धनुषा (माघ ५), बारा (माघ ९), रौतहट (माघ ६), सर्लाही (माघ ६), नवलपरासी (माघ ६), कास्की (माघ ७), रुपन्देही (माघ ५), नवलपुर (माघ ७), पाल्पा (माघ ४), कपिलवस्तु (माघ ५), बर्दिया (माघ ५), अछाम (माघ ४) डेडेलधुरा (माघ), बैतडी (माघ ५), बझाङ (माघ ४), कञ्चनपुर (माघ ५), सुर्खेत (माघ ५)
नेपाली राष्ट्रिय टिमको उपकप्तानमा रोहितकुमार पौडेल
नेपाल लगातार तेस्रो खेलमा पराजित, युगान्डाले जित्यो सिरिज